တိုင်းပြည်အရေးထက် ဒေါ်လာအရေးကို ဦးထိပ်ပန်တဲ့ BBC | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » တိုင်းပြည်အရေးထက် ဒေါ်လာအရေးကို ဦးထိပ်ပန်တဲ့ BBC
Posted by kanjosan on Oct 26, 2011 in Myanma News | 30 comments
ဘီဘီစီ (BBC) နှင့် သတင်းထောက် Anna Jones တို့ဟာ တာဝန်မဲ့စွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးစာရင်းကို တလွဲပြုစုခဲ့ပါတယ်… ဒါတွေဟာ သမိုင်းကျောင်းကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်စေတဲ့အတွက် လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ်…… အားလုံးသော အမျိုးချစ်သူများလည်း http://www.facebook.com/bbcburmese မှာ သွားရောက် ကန့်ကွက်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်….
Anna Jones ရဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးကိုတော့ ဒီ http://www.bbc.co.uk/news/world…-asia-pacific-11595983 မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်…
ဒီနေ့ ဒီသတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော်ဒေါသထွက်ပြီး ခံပြင်းခဲပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အပါအ၀င် မြန်မာများဟာ အင်တာနက် BBC facebook မှာ ကန့်ကွက်တဲ့ စာများ တစ်ပြိုက်နက် ပို့ကြပါတယ်။ BBC မှာ ဖေါ်ပြထားတာက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်လူမျိုးကို ချန်ထားပြီး ရိုဟင်ဂျာကို လူမျိုးစု တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ရေးသားသူ သတင်းထောက် Anna Jones ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးဟာ အဓိက မျိုးနွယ်ဆိုတာမသိတာဘဲလား၊ သူလိုချင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို စွဲထည့်တာဘဲလား။ ဘာမှ အထောက်အထား အခိုင်အလုံမရှိရင် အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ သတင်းထောက် သတင်းဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ အလွယ်တကူ သူများနိုင်ငံအကြောင်း လူမျိုးဇစ်မြစ်ကို ကိုလိုသလို ယူဆပြီး မရေးသင့်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကလည်း လူစုပြီး ဗြိတိန်သံရုံးကို သွားရောက်ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကျွန်ပြုပြီး သွေးခွဲ အုပ်ချုပ်သလို အခုလည်း ဘယ်လိုပုံစံနဲ့၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီလိုလုပ်တယ်တော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်း အခုတစ်လော တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး ပြသနာများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သား တိုင်းရင်းသားများ၊ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များပါ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒီပြသနာကို ဒီမှာတင်ပြီးမသွားဘဲ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ပါတီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်သူတစ်ဦးခြင်းဆီကပါ BBC သတင်းဌာနကို စာဖြင့် ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ လက်သင့်မခံကြောင်း၊ ပြန်လည်တောင်းပန်ရန် စာများပေးသင့်ပါတယ်။
သတင်းဌာန တခုက ရေးတာ သမိုင်းမဟုတ်ပါဘူး
BBC က ဗြိတိန်သံရုံးကို ကိုစားမပြုပါဘူး
ခင်ဗျားပြောသလို ရန်ကုန်ကရခိုင်တွေ ဗြိတိန်သံရုံးကိုသွား
ကန်.ကွက်ဆန္တပြမယ်ဆို …… အံဖွယ်ပါဘဲ အရှက်ကွဲလိမ်.မယ်
ခင်ဗျားပြောသလို နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူပြည်သား တိုင်းရင်းသားများ၊ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များပါ စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိကြမယ်ဆို……..
ရခိုင်ပျောက်ပြီးး ရိုဟင်ဂျာရောက်တာ..တော့ မမိုက်ဘူး အာစရိရေ..
အဲသတင်းရေးသူကို ကန့် ကွက်..ဆန္ဒပြသင့်တယ်..
လူတွေစုနေတယ်လဲ ပြောတယ်…ဆန္ဒပြဖို့ …..
မူရင်း ဆောင်းပါး link ဖတ်မရပါ. Page not found ပြနေပါသည်။ link ပြန်ပေးစေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးပါ။
၀င်မန့် ချင်လာလို့ ပါ..။ခွင့်ပြုနော်..
( ဗလီများကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ပြီ ဘုရားတည်ထားသည်ဟု ရိုဟင်ဂျားများမှ
ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်၍ ကန့်ကွက်လွှာတင်)
by U Naing Win on Tuesday, October 25, 2011 at 3:57am
မှ ရတာပါ ။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ၂၀၁၁-ခု အောက်တိုဘာ(၉)ရက်
နေ့စွဲပါ သဘောထား ကြေငြာချက်အား ကန့်ကွက်လွှာ
Monday, October 24, 2011 Rohingya Blogger No comments
ပြသာနာ၏ မူလရင်းမြစ်မှာ အယူဝါဒကျဉ်းမြောင်းသော
ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။ုအချုပ်အားဖြင့် Arakan တွင် Rohingya လူမျိုးများ
ကျနော်မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့ ပါတယ်…Stateless တစ်ယောက်ပါ….
ကျနော်သတ်မှတ်တဲ့ ပညာဆိုတာက..စာသင်ခန်းထဲ ကဒီဂရီတွေ မဟုတ်ရပါဘူး..
ဘယ်နိုင်ငံဘယ်နေရာဘဲရောက်ရောက်…၆ ရက်ထက်နေပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ ဘ၀ကို…
ကျနော်ကစာနာမိပါတယ်…(ဒါကအငြင်းပွားခြင်းမဟုတ်ဘဲ..ကျနော်ကသူငယ်ချင်းအတွက်ပျော်မိတာပါဗျား.၊ ဒီနိုင်ငံမှမဟုတ်ပါဘူး..တဘက်နိုင်ငံကလည်း..သူတို့ ကိုလက်ခံခဲ့ ရင်ပျော်မိမှာပါ…
စည်သူ အောင် says:
၁၃၊ ၅၊ ၈၈ – နေ့က မောင်တောမြို့နယ်တွင် အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ကုလားလှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန့်သည် မောင်တောမြို့ကို အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ ၀ိုင်းပြီးဟစ်အော်ကြွေးကြော် မီးရှို့သတ်ဖြတ် ရန်ချီတက်လာခဲ့ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ညနေရှစ်နာရီခွဲမှ နောက် တနေ့နံနက် ၃-နာရီခွဲအထိ ကြာခဲ့သည်။ သူတို့ ဘာသာစကားဖြင့် ဘုရားသခင် အလိုကျတိုက်ပွဲဝင်ကြ၊ မင်းတို့ တိုင်းပြည်ငါတို့ တိုင်းပြည် ဖြစ်ရမည်ဟူ၍ ဟစ်အော်ကြ သည်။
စည်သူ အောင် …
ခုလိုမျိုး သမိုင်းကြောင်းနဲ့တကွ ရှင်းပြ(ရေးပြတာ) အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ကျနော်က သမိုင်းလေ့လာသူမဟုတ်လို့ သေချာမသိပေမဲ့၊ ကျနော်သင်ဖူးတဲ့၊ကြားဖူးတဲ့သမိုင်းမှာတော့ ရိုဟိန်ဂျာ ဆိုတာကို မြန်မာလို့ (မြန်မာနိုင်ငံကလို့) မသိဘူး၊မကြားဘူးပါ။ wikipaedia ဆိုက်မှာရေးထားတဲ့ ကမ္ဘာ အသိအမှတ်ပြု မြန်မာ့သမိုင်းမှာလဲ အဲဒီရိုဟိန်ဂျာတွေမပါပါဘူး။
အပေါ်က တယောက်က ”ခင်ဗျားပြောသလို ရန်ကုန်ကရခိုင်တွေ ဗြိတိန်သံရုံးကိုသွား
ကန်.ကွက်ဆန္တပြမယ်ဆို …… အံဖွယ်ပါဘဲ အရှက်ကွဲလိမ်.မယ်” တဲ့။ ဘာကိုရှက်စရာလို့ထင်တုံး၊ ကိုယ့်မြေကို့ရေ(ကိုယ်အိမ်ကိုယ့်ယာ) မှာနေ ရင်းထိုင်ရင်း စော်ကားတာကိုခံမှာလား၊ ကိုယ်အိမ်ကိုယ့်ယာ မှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်နေခဲ့တာကို ခုမှ ဒါမင်းအိမ်မဟုတ်ဘူး ပြောရင်ရော၊။
(အရှက်ကွဲလိမ့်မယ် ) အရေးအသား မကြိုက်ပေါင်..၊
လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ လုပ်သင့်တယ် ထင်တာပါပဲ…၊
မှန်တယ် / မှားတယ် ဆိုတာ တစ်ကယ့်သမိုင်းက သက်သေပြပါလိမ့်မယ်…၊
( ထင်ရာစိုင်း ပါးစပ်သမိုင်းကို မဆိုလိုပါ)
ဆရာ အဏ္ဏ၀ါစစ်သည် ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။
( နိုင်ငံတကာမှာ ပြောဆိုနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်သည်ဟောင်း တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့ အကြုံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ် ရှိသူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။ )
သမိုင်းတစ်ကွေ့ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ အကြောင်းရေးဖို့ အချက်အလက်တွေ ပြန်ရှာနေ တုံး ရေဒီယိုမှာ၊ အင်တာနက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ဆိုတာတွေ ကြားရသည်။ အစိုးရကို ဆန့်ကျင် နေ သူများကလည်း ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရကို ဆော်ဖို့အခွင့်အရေးရင် မနည်းဘူးဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဂရုဏာသက်စရာ အဖိနှိပ်ခံများအဖြစ် ဘေးတီးပေးကြသည်။ ထိုလုပ်ရပ်သည် မည်မျှ အန္တရာယ်ကြီး သည်ကို ထိုသူတွေသိပါရဲ့လား။ ကျွန်တော် ၀န်ထမ်းဘ၀ တစ်လျှောက်တွင် နှစ်အတော်များများ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ နေခဲ့သဖြင့် ဒီပြဿနာကို ထိတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် သိသမျှကို ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူမှန် ပြီး ဘယ်သူမှားသည်ကိုတော့ စာဖတ်သူ လူငယ်များသာ စဉ်းစားကြပါ။
ပထမဆုံး ပြောလိုသည်က ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာကို မူဆလင်ဘာသာဝင် လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ပြောနေသည်။ ကျွန်တော် စိန်ခေါ်လိုပါသည်။ မြန်မာဘုရင် လက်ထက် စစ်တမ်းတွေ၊ အင်္ဂလိပ် ဂေဇက်တီးယားတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခေတ် မှတ် တမ်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုသည့် စကားလုံး ရှာကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်တော့မှ တွေ့မည်မဟုတ်၊ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်က ကောက်ခဲ့သော သန်းကောင်စာရင်းများ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းကောင်စာရင်းများတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု မရှိပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးမှာ စစ်တကောင်း ကုလားများက ရခိုင်ပြည်သားများကို ခေါ်သည့် ရိုဟင်ရှာ ဆိုသည့် စကားက လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားကုလားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်ပြည်သား နံမည်ခံလိုသဖြင့် ဒီစကားကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ့အရင်က ဒီကုလားများအတွက် နံမည်ရှိပြီးသား ဖြစ်သည်။ ဒါကတော့ ကုလားဆိုး သို့မဟုတ် မူဂျာဟစ်များ ဖြစ်သည်။ ဒီကုလားဆိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လို ရောက်လာခဲ့သနည်း ။
ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင့် နယ်ချင်းဆက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခင်က မူစလင်ကုလားများ ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဒီလူတွေက ဒေသခံများမဟုတ်။ ရခိုင်ဘုရင်များ စစ်နိုင်သဖြင့် ဖမ်းလာခဲ့သူများ၊ ရခိုင်လယ်ယာ မြေများတွင် အလုပ်ကြမ်းလာ လုပ်သူများဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက် စစ်တမ်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂလားကုလား သုံးသောင်းကျော် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ အင်္ဂလိပ်လက် အောက်ရောက်သောအခါ မြန်မာနိုင်ငံသည် အန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့်အခါ ကုလားတွေ တံခါးမရှိ၊ ဓားမရှိဝင်လာကြသည်။ ဆင်းရဲတဲ့ ကုလားတွေက လယ်ကူလီ လုပ်သည်။ ချမ်းသာတဲ့ ကုလားက ငွေတိုးချေးစားသည်။ အင်္ဂလိပ်က စူးအက် တူးမြောင်းကြောင့် စပါးဈေးကောင်းတော့ လယ်သစ်တွေဖော်ဖို့ ကုလားတွေ ခေါ်လာသည်။ ထိုအချိန်က တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ် ဘင်္ဂလားက ကုလားတွေကို သဘောင်္နဲ့ သွင်းကြောင်း။ သဘောင်္ခကို အထူးနှုန်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ရှေ့မီနောက်မှီ ရခိုင်လူကြီးများက ရှင်းပြဖူးသည်။ သေချာသည်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်စ ၁၈၃၂ ခုနှစ် စာရင်းအရ လူဦးရေ တစ်သိန်းခွဲရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ၁၉၃၂ ခုနှစ် သန်းကောင်စာရင်းအရ စစ်တွေခရိုင် တစ်ခုတည်း၌ပင် လူဦးရေ ခုနှစ်သိန်းခွဲ ရှိနေတာတွေ့ရ၏။ ထိုကဲ့သို့ ချက်ခြင်း တိုးလားသည့် လူများမှာ အင်္ဂလိပ်တို့ နေရာချပေးခဲ့သည့် ဘင်္ဂလား ကုလားများပင် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ တိုးလာသည့် ကုလားအများစုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ဆက်နေသည့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုအချိန်က ထုတ်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ် အစိုးရ ဘားမားဂေဇက် စာအုပ်တွင် ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် မောင်တော မြို့နယ်၌ မူဆလင် ကုလားနှစ်သောင်း ရှစ်ထောင်ကျော် ရှိရာမှ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် ကုလား တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းကျော် ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုဒေသတွင် ရောက်လာသော ကုလားများမှာ တစ်ဖြေးဖြေးနှင့် ရခိုင်များကို မောင်းထုတ်ရန် ကြိုးစား လာခဲ့သည်။
ယနေ့အထိ ရခိုင်လူမျိုးတို့ မေ့မရသည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ရခိုင်- ကုလား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အင်္ဂလိပ်တပ်များ ဆုတ်ခွာသွားပြီး ဘီအိုင်အေတပ်များ ရောက်မလာမီ ကြားတွင် ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင်နဲ့ မောင်တောနယ်တွေမှာ ရှိသည့် ရခိုင်ရွာများကို ဘင်္ဂလာလီ ကုလားများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူသတ်ခြင်းများ လုပ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာ အစမှာ မြေပုံမြို့နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုး သူကြီးတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ကုလားနှစ်ဦးကို ရွာသားများက သတ်ပစ်ရာမှ စခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် နယ်စပ်ဒေသမှ ရခိုင်လူမျိုးများကို ယခုခေတ်အခေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ် သွားခဲ့ရသည်။ ဆုတ်ခွာသွားသည့် အင်္ဂလိပ် တပ်များက နယ်စပ်ဒေသ ကုလားများကို လက်နက်များ ထုတ်ပေးပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်သဖွယ် တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုး သွားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုပြဿနာကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး နှစ်သောင်းခန့် သေဆုံးသည်ဟု ရှေးလူကြီးများက ပြောကြ သော်လည်း အထောက်အထား မတွေ့ရ။ သို့သော် စစ်ပြီးခေတ် ကတ်စ်ဘီအစိုးရ အစီရင်ခံစာတွင် ထိုအချိန်က ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းသို့ ထွက်ပြေးလာသော ရခိုင်လူမျိုးများကို ပြန်လည် နေရာချ ပေးရာတွင် မူလက မောင်တောဒေသတွင် ရခိုင်ရွာ ၁၂၉ ရွာရှိခဲ့ရာ ၆၈ ရွာသာပြန်လည်ထူ ထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအချိန် ကစပြီး ဘင်္ဂလီ ကုလားတို့က ဘူးသီးတောင်၊ မောင် တော ဒေသတွင် လူများစု ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် အန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းမှု များလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်စဉ် အန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှ မူဆလင် အများစု နေထိုင်ရာ ဒေသများကို ခွဲထုတ်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ထူထောင်ပေးရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာ၏။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းမည့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် ဘင်္ဂလားပြည်နယ်က အရှေ့ပါကစ္စတန် အဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဘူသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသက ကုလားများကလည်း ထိုဒေသများကို ပါကစ္စတန်နှင့် ပူးပေါင်းရန် တောင်းဆိုမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လန်ဒန်သို့ လွတ်လပ်ရေး ဆွေးနွေးရန်အသွား အန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ခေါင်းဆောင်ကြီး နေရူးနှင့် တွေ့ခဲ့သည့် အကြောင်း ကြားဖူးကြ ပါသည်။ သို့သော် ထိုခရီးစဉ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတဖြစ်လာမည့် အလီဂျင်းနားနှင့် တွေ့ခဲ့သည်ကို သိသူနည်းပေလိမ့်မည်။ တက္ကသိုလ်နေ၀င်း၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အလီဂျင်းနားက ဘူသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသကို ပါကစ္စတန်နိ်ုင်ငံအတွင်း ထည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုမှုများကို လက်မခံကြောင်း၊ ထိုဒေသများသည် မြန်မာပိုင် ဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ် ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ထိုတောင်းဆိုမှုများ မအောင်မြင်သည့်အခါ မူဂျာဟစ် အမည်ခံ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်း သူများ ပေါ်လာသည်။ နယ်စပ်ဒေသတွင် အခြေခံပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသကို သီးခြားပြည်နယ် ထူထောင်ဖို့ လုပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရ စခန်းများကို တိုက်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးများကို မောင်းထုတ်သည်။ တပ်မတော်ကလည်း ကေအင်ဒီအို အရေးနှင့် လုံးပန်းနေရသဖြင့် အမြစ်ပြတ်အောင် မတိုက်နိုင်၊ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှသာ နယ်စပ်ရှိ မူဂျာဟစ်တို့၏ တောင်ပြိုစခန်းကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က သတင်းစာများကို ပြန်ဖတ်လျှင် ၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၄ အကြားတွင် ကုလားဆိုးဟု သတင်းစာများက ခေါ်သည့် မူဂျာဟစ်များ မည်မျှ ရက်စက်ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
သို့သော် စစ်ရေးတွင် အရေးနိမ့်သွားသည့် ကုလားများက နိုင်ငံရေးနယ်တွင် ခေါင်းထောင်လာ ပြန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ခေါင်းထောင်နိုင်ခြင်းမှာမူ ဖဆပလတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။ ထိုအချိန်က ရခိုင် ဒေသ ( ပြည်နယ်မဖြစ်သေး) တွင် ဖဆပလက အင်အားမကောင်းပဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီ ညွတ်ရေးအဖွဲ့ ရတညက အင်အားကောင်းသည်။ ထိုအခါ ဖဆပလက ဘင်္ဂလီကုလားများကို ဖဆပ လအတွင်းဝင်ရန်နှင့် အမတ်အရွေးခံရန် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မရှိသော ကုလားများမှာ ကုလားသူကြီးက ထောက်ခံစာရေးပေးလျှင် မဲပေးခွင့်ရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဒူဂေါ်ဖား၊ စူလတန် အာမက်၊ အဘူခိုက်၊ အဘူဘော်ရှော့ ဆိုသည့် မုတ်ဆိတ်ဖားဖား ကုလားများသည် ဖဆပလ အမတ်များ ဖြစ်လာသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပါလီမန်အတွင်းဝန် အဖြစ် စူလတန်မာမွတ် ဆိုသူဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ လ၀က အတွင်းဝန် ကုလားတစ်ယောက်လည်း ရှိခဲ့သေးသည်။ နံမည်မမှတ်မိတော့။ ကုလားကို လ၀က အတွင်းဝန် ခန့်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။ ထိုခေတ် ဖဆပလ အစိုးရက ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အရှေ့ပါကစ္စတန်မှ ကုလားများကို ပါမစ်ဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ဝင်လာသူ အများစုက ပြန်မသွားပဲ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ကျန်နေခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရတက်မှသာ ထိုသို့ ပါမစ်ဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုခြင်းကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ရသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် စကားလုံးကိုလည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဖဆပလ အမတ်ဖြစ်နေသည့် ကုလားများက စတင်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်မူဆ လင်ဟု ဆိုသည်။ တကယ်တော့ ကုလားသည် ကုလား၊ ရခိုင်သည် ရခိုင်သာဖြစ်၏။ ရခိုင်လူမျိုးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာရှိသည်။ မူဆလင်မရှိ။
တော်လှန်ရေး ကောင်စီလက်ထက်တွင် နယ်စပ်ဒေသ၌ ခိုးဝင်မှုများ ရှိသေးသော်လည်း ယခင် ကလောက်မများတော့။ ကုလားဆိုးများလည်း နိဂုံးချုပ်သွားသည်။ သို့သော် ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေအတွက် ပြည်သူများထံမှ အဆိုပြုချက်များတောင်းသည့်အခါ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောက ကုလားများက ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသကို မေယုတိုင်းဟု သီးခြားဖွဲ့စည်းရန်။ အလံတွင်လည်း ကြယ် ၁၄ လုံးအစား ၁၅ လုံးထည့်ပေးရန် စာတမ်းများပြုစုတင်ပြခဲ့သည်။ အတော်ပင် အရှက်မဲ့ ရဲတင်း သောလုပ်ရပ်ဖြစ်၏။
ဤသို့ဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးရှိမရှိဆိုသည်ကို ရှင်းလောက်ပြီဟုထင်ပါသည်။ ထိုသို့ ခိုးဝင် အခြေချနေသည့် ကုလားများကို စိစစ်ရန်အတွက် လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ လက်ထက်က ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊ န၀တ အစိုးရ လက်ထက်က ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်တိုင်း မှတ်ပုံတင်မရှိသည့်ကုလားများက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ထွက်ပြေး ပြီး သူတို့ကို မြန်မာအာဏာပိုင်များက နှိပ်စက်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရပါသည်ဟု အော်သည်။ နှစ်ကြိမ် လုံးတွင် မြန်မာဘက်က လွတ်လပ်ရေးမရမီ ကာလထဲက မိဘများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား ပြနိုင်သူများကို ပြန်လက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ ခိုးဝင်လာ သူတွေက ဒုက္ခသည် နံမည်ခံပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ကျန်နေခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ဟု နံမည်ခံလာကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ဦး ဆိုပြီး သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ဖွဲ့သည်။
အခု ထိုင်းမှာ၊ မလေးရှားမှာ ရှိနေသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ မှ ထွက်ခွာလာသည့် ကုလားများသာဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံတွေကို သွားသလို မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့လဲ ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစား နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အစိုးရက နယ်စပ်မှာ လ၀ကတွေကို အများအပြား ချထားပြီး နယ်စပ် ဒေသကို ထိန်းသိမ်း နေရသည်။ သို့သော် ကုလားများက မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ များဖြစ်သည်၊ မြန်မာတို့က နှိပ်စက်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရပါသည်ဆိုပြီး ထိုင်းမှာ၊ မလေးရှားမှာ နိုင်ငံ ရေးခိုလှုံခွင့်ရအောင် ကုလားမူ၊ ကုလားချွဲလုပ်သည်။ ဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအစိုးရကို တွယ်ဖို့ အခွင့်အရေးရလျှင် တော်ပြီဆိုသည့် အတိုက်အခံ များကလည်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို မြန်မာအစိုးရ၏ နောက်ထပ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု တစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်နိုင်အောင် မီဒီယာ ပေါ်တင်လာကြသည်။
သို့သော် ယခုကိစ္စသည် တပ်မတော် အစိုးရနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စမဟုတ်၊ အမျိုးသား ရေးဖြစ်သည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက် မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထိုးဖောက် လာခဲ့သည့် ကုလားများက သမိုင်းတွင် မရှိသည့် လူမျိုးစုနံမည်ကို ဖန်တီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် တရားဝင်ခြေကုတ်ယူဖို့ လုပ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ချင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုများကို ဘေးချိတ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာမျက်နှာစာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါ၏။
ဘာဖြစ်လို့ ဒီအစ်ရှုးတွေ.. ဒီခေတ်.. ထိပ်ရောက်လာသလည်း… ဆိုတော့ကာ…
(ယူအက်စ် သင့်ခ်တန့် အတွေးယူပြောရရင်..) လိုချင်လို့ပဲ..။
ရခိုင်ပြည်နယ်(ကျောက်ဖြူနယ်)က… ဘီလီယန်ချီ ငွေရှာ(ငွေထွက်) နေပြီလေ…။
ရခိုင်ကလည်း.. ပြည်နယ်..အဲဒီက နိုင်ငံပြန်လိုချင်လိမ့်မယ်..။
ဘင်္ဂလီကလည်း.. ပေး..ပေး..မပေးပေး.. ဖြစ်လိမ့်မယ်..။
အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့.. အာရပ်တွေ ကွန်ဖလစ်.. အဲဒီရွှေ့ယူနေတာပဲ..။
ဒီလောက်ပဲ.. ဒီလောက်ပဲ..။ ;)
ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို နားလည်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတော့ မသိသလောက်ပါ၊ ဟိုတစဒီတစ ဖတ်ရတာပဲ ရှိသေးတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အရတော့ ဟိုးအရင်ထဲက အာရပ်ကုန်သည်များက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မွတ်စလင်များ ရခိုင်ပြည်မှာရှိခဲ့လည်း ယနေ့အရေအတွက် သိန်းချီရှိဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ တဖက်နိုင်ငံကနေ ဝင်လာတာ အများစုဖြစ်မယ်လို့ ယူဆတယ်။ လူမျိုးရေး၊ အချုပ်အခြာ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ ပတ်သက်နေလို့ သိပ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်များကို ခေတ်မှီပြည့်ဝတဲ့ အစွန်းမရောက်တဲ့သူများ ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဒေသအနှံ့၊ အယူဝါဒတိုင်းလိုလိုနဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မွတ်စလင်များ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်စေလိုပါတယ်။ အများကလွန်သလား ကိုယ်ကပဲ မှားနေသလားလို့ပါ။ ဘာသာတရားကို မဆိုလိုဘဲ မိမိရဲ့ တွေးပုံခေါ်ပုံ ပြုမူပုံများကိုပါ။ ကျနော့်မှာ မွတ်စလင် သူငယ်ချင်းများရှိပါတယ်။ သူတို့သည် ခေတ်မှီတယ်၊ ရိုးသား ကြိုးစားတယ်၊ ခင်မင်ဖြူစင်တယ် သို့သော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို သစ္စာခံတယ်၊ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လူမှန်တယ်ဆိုတဲ့ တောသားစရိုက်ရှိတယ်။ အဓိကတာဝန်ရှိသူတွေက ဗလီဝတ်ကျောင်းတွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ အခြေခံသင်ကြားချက်တွေကို မပြင်နိုင်သ၍ အခြားလူမျိုးတွေနဲ့ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ။ ကိုရွှေရခိုင်များကလည်း သိတဲ့အတိုင်း (သူတို့မှ မဟုတ်ပါ၊ ချင်းတွေလည်း အဲသလိုပဲ) ယုံကြည်မှုအားနဲပြီး ကိုယ့်လူမျိုးကို စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကနေ အစွန်းရောက်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ပြုမူကြတယ်။ အကျိုးဆက်က လူသောက်မြင်ကတ်ခံရတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကျုပ်တို့ ရွှေမြန်မာတွေက သာတယ်ထင်တယ်၊ လက်တွဲမိလည်း ခဏတဖြုတ်၊ ကာလတခုကြာရင် ကိုယ့်လမ့်းကိုယ်လျောက်ပဲ။ (အဖြူပိုဆန်တယ်ပေ့ါဗျာ)
အင်း ..တရုတ်ဘက် ကနေ ရိုဟင်ဂျာ ဘက် ထိုးကျွေးပြီလားးးးးးးးးးးးးးးးးး
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်ဂါလီတွေက ရခိုင်၊ဘူးသီးတောင်မှာတင် ခေါင်းထောင်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။
ရန်ကုန်ကို ပါသိမ်းမိနေပြီ။ ရန်ကုန်က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများစုက အဲဒီ ဘင်ဂါလီမဲစုတ်နံစော်တွေလက်ထဲမှာပါဗျား။
Father Land တို့ Mother Land တို့ Naing Group တို့ ဆိုတာတွေကို ပိုင်တာ ဘယ်သူတွေ မှတ်နေတုန်း။
နေတိုး ရခိုင်တောင်မှ အဲဒီကောင်တွေက ကြော်ငြာခေါ်ရိုက်တော့ လိုက်တာပဲ။ ပြေတီဦးကိုလည်း သူတို့ ဝတ်သလို အတွန့်အတက်တွေနဲ့ ကြောင်တောင်တောင် အရောင်တွေဆင်ပေးပြီး တွန့်ခိုင်းလိုက်သေးတာပဲ။
လူမျိုးရေး အမြင် ကျဉ်းမြောင်း တာမျိုးမဟုတ်ပါ…..
ဒါပေမယ်…. မူဆလင် ဘာသာဝင်တွေကတော့ သူတို့လူမျိုးသာ ခွဲခြား ရှေ့တန်းတင်လေ့ရှိပါတယ်…
တစ်ခြားဘာသာဝင်ဆိုရင်တော့ အရင်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံလို့ ရနိုင်ပါတယ်…..
မူဆလင် ကတော့ လက်ခံလိုက်ရင် ပြသနာ ကတွဲပြီးလိုက်လာမှာပါပဲ….
ဟိုးအဝေးကြီးက သမိုင်းကြောင်း တွေကတော့ မသိဘူး……
ကိုယ်လိုရာဆွဲပြောမယ် ဆိုရင်တော့ အဲသည်လို ရှောက်ပြောကြေးဆို…
ယိုးဒယားလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တစ်စိတ် တစ်ဒေသလို့ ပြောရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…..
ရှင်းအောင် ပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် လက်မခံနိုင်ကြောင်းပါ…..
ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် ဗမာ ရခိုင် ရှမ်း အဲဒီကမှဖြာထွက်လာတဲ့
တွေပဲဖြစ်မှာ…….လူကပြား ရေလက်ကြားတဲ့…… ကျုပ်တို.နိုင်ငံနောက်အနှစ်ငါးဆယ်
ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ ဒါဘဲတွေ့တဲ့ အတွက် ဒီ post က မမှန် သတင်းဖြစ်ပြီး လူမျိူးရေး ပြသနာ ဖြစ်နိုင်လို့ ပြန်ဖျက်သင့်ကြောင်း ယူဆမိကြောင်းပါခင်ဗျား။
The Arakan Rohingya National Organisation (Arno), representing one of Burma’s most persecuted minorities, said no credible election could be held under the “strange and undemocratic constitution”.
“ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင်လူမျိုးကို ချန်ထားပြီး ရိုဟင်ဂျာကို လူမျိုးစု တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ရေးသားသူ သတင်းထောက် Anna Jones ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးဟာ အဓိက မျိုးနွယ်ဆိုတာမသိတာဘဲလား၊ သူလိုချင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို စွဲထည့်တာဘဲလား။”
အထက်က သတင်းဆိုရင် kanjosan ပြောစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ သူပြောတာ ကျွန်တော်ရှာမတွေ့ခဲ့တာ ၊ကျွန်တော် ဘာသာပြန်မှားတာ ဆိုလျင် kanjosan ကို ပြန်တောင်းပန်ပါ့မယ်။
ဲပြီးတော့ သတင်းက ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ က သတင်းပါ။
အိမ်ချင်းနီးတော့.. ရခိုင်မုန့်တီချက်ရင်.. လာပေးတယ်..။ ပါတီလုပ်ရင် သွားစားတယ်..။ အဲဒီအတိုင်းပဲ.. ၁၀မိုင်လောက် တောင်ဖက်ဆင်းလိုက်ရင်.. အဲဒီမှာ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့.. မွတ်ဆလင်တွေ ထောင်ချီနေတဲ့ ရပ်ကွက်ရှီိတယ်..။ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားသမို့.. အဆင်ပြေသလို ကုလားစာစားချင်သွားစားတာပဲ..။ သူတို့ အစ်လုပ်ရင် ဖိတ်တယ်..။ မုန့်ဟင်းခါး ချက်တာ ကောင်းမှကောင်း.. သွားစားတာပေါ့..။
ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း.. (အမှတ်မမှားရင်) ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မှာ.. ထောင်ချီနေကြတယ်..။
အေးဆေးပါပဲ..။ မကြာခင်.. အကုန်အမေရိကန်တွေဖြစ်ကုန်ကြမှာ..
အစ်နေ့ အလှူဆို.. ရခိုင်ရော.. ချင်းရော..ကချင်ရော.. အကုန်သွားစားကြတာပဲ..။
စံနစ်တခုအောက်မှာ.. ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ မခက်ပါဘူးဆိုတာ ပြောချင်တာပါ..။
ယူအက်စ်ပြည်နယ်တွေ ဘယ်လိုခွဲကြသလည်း.. ဒီအတိုင်း မြေပုံကို စားပွဲပေါ်တင်.. မျဉ်းတားသလို.. လိုင်းအတည့်ဆွဲ.. ခွဲတာပဲ..။ ဆိုတေ့ာ ..ကယ်လီဖိုးနီးယားက ဂိုးလ်ဒမ်းစတိတ်… အကောင်းဆုံးတွေ တော်တော်များများရထားတယ်..။ အနီးအနားက နီဗားဒါးပြည်နယ်က သဲကန္တာရ..။ ဘာမှ မြေလုမနေပါဘူး..။ ပိုကျယ် ပိုကောင်းတော့ ..အဲဒီထဲနေချင်တဲ့သူတွေ.. အလုပ်ပိုလုပ်..အခွန်ပိုဆောင်ကြပေါ့..။
ဆိုတော့.. တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားက.. အရင်အဖြူများတာကနေ.. အခု.. တောင်ဖက်ကလူတွေ ခိုးဝင်လာတာများပြီး.. အဲဒီနယ်သားတွေ( လက်တီနို/နာ)တွေ အများစုဖြစ်နေပြီ..။ မဂျော်ရတီလေ..။ ကယ်လီဖိုးနီယားမှာ.. သူတို့ပြောစကား(စပင်းနစ်ရှ်)ကိုပါ.. အစိုးရရုံးသုံးတခုအဖြစ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်.. အေးရော..။
နောက်.. ဖယ်ဒရယ်အစိုးရက ဘာလုပ်သလည်း ဆိုတော့.. မဲများများပိုရနိုင်တာမို့.. ပိုပြီးတောင် (ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်) ဖားနေသေးတယ်..။
လူဦးရေစီးဆင်း..ပြောင်းရွေ့မှုကို.. လူ့သမိုင်းအဆက်ဆက်.. ဘယ်သူကမှ ထိမ်းချုပ်လို့မရခဲ့ဘူး..။ ရမှာလည်း မဟုတ်ဖူး…။
ယူအက်စ်တောင်ဖက်မှာ..၁၀ပေလောက်အမြင့်ခြံစည်းရိုးတားပြီး.. ၂၄နာရီ ကင်းလှည့်နေတဲ့ကြားက… ခိုးဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့.. လူ ၁၂သန်းလောက်ကိုတောင်..ယူအက်စ် နိုင်ငံသားပေးဖို့.. လုပ်နေသေး..။
လူပိုများများရှိတော့..အလုပ်များများလုပ်ကြ.. တိုင်းပြည်ဂျီဒီပီ တက်တာပေါ့..။ အလုပ်လုပ်ကြဖို့အတွက်.. နည်းဥပဒေတွေ..ပြဌာန်းပေးပြီး..အခွန်စံနစ်တကျ ကောက်ယူတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်.။
မြန်မာ ၃-၄သန်းလောက်က အပြင်ပြည်ပ ရွေ့ပြောင်းထွက်ပြေးနေကြတဲ့ ခေတ်မှာ.. အနောက်ဖက်နဲ့..မြောက်ဖက်က.. လူသိန်းချီ ၀င်ရောက်အခြေချလာနေကြတာက..တိုင်းပြည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစံနစ် အကြီးအကျယ်မှားနေတယ်.. ပြတာပဲ..။
အဲဒါကို.. ပြင်ဖို့အဓိက အားစိုက်ရမယ်ပဲ..ထင်မိတယ်..။
ဒီဘီဘီစီ ကိစ္စက..အင်တာနက်တခွင်.. တော်တော်ပွက်လောရိုက်နေတာမို့.. သွားရာလမ်းဦးတည်နေတာထဲ.. လူမျိုးေ၇းတွေ..မုန်းတီးမှုတွေ..အရိပ်အယောင်တွေ့ရပါတယ်..။ ဒါတွေ.. ဒီရွာထဲ မခေါ်လာစေချင်… လာမတင်စေချင်ပါဘူး..။
ဒီတော့.. ဆက်တက်လာမမဲ့.. ကော်မန့်တွေ.. သေသေချာချာ စောင့်ကြည့်ပြီး.. အခြေအနေမကောင်းရင်..ပို့စ်ပိတ်ပစ်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း..။
ကို htoosan ခင်ဗျာ ဘယ်တုန်းက BBC ရဲ့သတင်းကို သွားကြည်တာလဲ မသိဘူး။ မြန်မာပြည်မြေပုံကိုရော တွေ့လိုက်မိသလား။ အဲ့ဒီမြေပုံရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာတစ်ခုတည်း ထည့်ထားတာကို တွေ့လိုက်မိသလား…။ ကျွန်တော့အထင် မနေ့ညနေလောက်ကမှ သူတို့ပြန်ဖြုတ်သွားပါတယ်…။ သတင်းက နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ ကဖြစ်ပေမဲ့ အခုတစ်လောမှ ထဖြစ်သွားတာမို တင်တာပါ.. ။ သတင်းဟောင်းကို တင်ခွင့်မရှိဘူးလား ခင်ဗျာ။
သကြီးခင်ဗျာ.. သတင်းတစ်ခုအနေနှင့်တင်ခြင်း မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမျိုးသားရေးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်… လူမျိုးရေးခွဲခြား၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှု့အနေဖြင့် တင်ခြင်းမဟုတ်ပါ… သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် မကိုက်ညီပါက .ပို့စ်ပိတ်ပြစ်နိုင်ပါတယ်…
ကျွန်မက နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်၊ အစိုးရဘက်တော်သားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာလည်း မဟုတ်ကြောင်း အရင် ပြောပါရစေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မဟာ ဘာလူမျိုးခြားသွေးမှ မရောစပ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ပါ။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများဟာ အာဏာပါဝါကို လက်ကိုင်ထားပြီး ငွေမျက်နှာ တခုတည်းကြည့်ကာ နိုင်ငံကို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသူများနဲ့ ဘာမှ သိပ်မကွာတဲ့ အာဏာမရှိသော်လည်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးနဲ့ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် မျောက်ပြ ဆန်တောင်းနေကြသူများ အလယ်က မြေစာပင်တွေဆိုတာကို ကျွန်မ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ။ ကြားထဲက ငထွား ခါးနာရသူများကတော့ မြန်မာပြည်သူများနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရတဲ့၊ ဘ၀တွေ စုတ်ပြတ်သပ်သွားသော်လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တော်လှန်နေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၊ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများသာဆိုတာ…
by Sit Aung on Monday, October 31, 2011 at 3:43pm
ဘီဘီစီက ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားလုပ်လာတဲ့အပေါ် ကိုချိုတူးဇော်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့  ဖတ်ဖူးတဲ့ ပိတောက် မြေဆောင်းပါးကို ပြန်ရှာပေးလိုက်ပါတယ်
( အဏ္ဏ၀ါစစ်သည်ရဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပရောက် ရခိုင်ကျောင်းသား တစ်ဦးရဲ့ တင်ပြချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ဘယ်သူတွေ ပွဲထုတ်လာခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင် စရာ ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်များ ပါတာမို့ ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်။ )
အဏ္ဏ၀ါ စစ်သည်ဆိုသူက ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်း ရေးသွားပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ ဖဆပလခေတ်က အကြောင်းတွေ ပါလာလို့ ဗဟုသုတရပါတယ်။ ဖဆပလက အာဏာတစ်ခုထဲ အတွက် ရေရှည် အန္တရာယ်ကို မကြည့်ဘဲ ကုလားအမတ်တွေ မွေးခဲ့တယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကုလားအမတ်တွေက စသုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ထဲမှာ တစ်ခုတော့ ထပ်ဖြည့်ချင်ပါတယ်။ တည်မြဲ၊ သန့်ရှင်း ကွဲပြီးနောက် အိမ်စောင့်အစိုးရ တက်တယ်။ အိမ်စောင့်အစိုးရက ၁၉၆၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ် ဆိုတော့ ၁၉၅၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဦးနု ရခိုင်ကို မဲဆွယ်ဖို့ လာတယ်။ မောင်တော မြို့နယ်မှာ စည်းရုံးရေး လုပ်တဲ့အခါ ဦးနုက သန့်ရှင်းသာ အနိုင်ရရင် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးလို့ သတ်မှတ်ပေးမယ်။ မြန်မာ့ အသံက တိုင်းရင်းသား အစီအစဉ်တွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာနဲ့ အသံလွှင့် ပေးမယ်လို့ ကတိ ပေးသွားတယ်။ သူနိုင်တော့ မြန်မာ့အသံကနေ ရိုဟင်ဂျာ အစီအစဉ်ဆိုပြီး လေးလလောက် လွှင့်လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော်လှန်ရေး ကောင်စီ တက်တော့မှ အဲဒီအသံလွှင့် အစီအစဉ် ရပ်သွား တယ်။
နောက်ပြီး ဦးနုကို ကုလားတွေက မေယုပြည်နယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းတယ်။ ဦးနု က ပြည်နယ်တော့ မပေးဘူး၊ သို့သော် သီးခြားဒေသ တစ်ခု သတ်မှတ် ပေးမယ်လို့ ကတိပေး သွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးနုရဲ့ ပထစပါတီ အနိုင်ရတဲ့အခါ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွေကို မေယုနယ်ခြား ခရိုင်ဆိုပြီး သီးခြားခရိုင် တစ်ခုဖွဲ့တယ်။ အဲဒီခရိုင် ထဲက ကုလားတွေကို မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီလို လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ၁၉၇၈ ခုနှစ် နဂါးမင်း စစ်ဆင်ရေးနဲ့ ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးလုပ်တဲ့ အခါ အဲဒီကုလားတွေဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ခိုးဝင်လာတဲ့ ကုလားတွေမှန်း သိသိကြီးနဲ့ မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားတော့ ပြန်လက်ခံခဲ့ရတယ်။ တကယ် ဥပဒေအရက ၁၈၈၅ မတိုင်မီကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ လူများကိုပဲ နိုင်ငံသား အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး အမျိုးသား မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ ကူလီကူမာကျတဲ့ ကုလားများမှာ တာဝန်ရှိသလို အမတ်နေရာ သုံးလေးနေရာ ရဖို့အတွက် အာဏာ ရူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေမှာလဲ တာဝန်ရှိ တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်။
ဒါက အတိတ်တုံးက အဖြစ်။ အခု ခေတ်မှာလဲ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာပေါ် ရောက်လာအောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်မြန်မာ နိုင်ငံရေးသမား၊ ဒီမိုကရေစီ သမားဆိုသူတွေ ပါနေပြန် တယ်။ ပထမဆုံး ပါလာတဲ့အဖွဲ့က ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားအဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး ( မကဒတ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ပြောတိုင်း အလွန် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က မကဒတ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ကေအင်ယူက ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ အစ္စလမ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦးနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ချို့က ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ထောက်ခံဖို့၊ အဲဒီလို ထောက်ခံရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ထောက်ပံ့ငွေတွေ ရအောင် လုပ်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က မကဒတမှာ ရှိတဲ့ ရခိုင် ကျောင်းသားများက ဒီအစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်က တွေးတာက န၀တကို တိုက်ဖို့အတွက် အားလိုတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အားယူဖို့ အတွက် ရနိုင်တဲ့ လက်နက် အားလုံးကို သုံးရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ မကဒတ ( ဗဟို) ရဲ့ သုတေသနဌာနက စာမျက်နှာ ၄၉ မျက်နှာပါစာ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတမ်း တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစာတမ်းမှာ ရိုဟင်ဂျာ တွေအပေါ် မြန်မာအစိုးရက ပြုလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ ဖိနှိပ်မှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက လူမျိုးစုတစ်ခု အဖြစ်နဲ့ ပုံဖော်ခဲ့ ပါတယ်။
အဲဒီစာတမ်းဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကုန်မှာ န၀တက ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မှတ်ပုံတင် စစ်ဆေးပြီး တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသူတွေကို ဖော်ထုတ်တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ကုလားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘက်ကို ပြန်ထွက်ပြေးတဲ့ အချိန်နဲ့ အချိန်ကိုက် ပေါ်ထွက် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်းလိုပဲ INGO တွေဆီကလည်း ရိုဟင်ဂျာများ အပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ ဆက်တိုက် ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီစာတမ်း အားလုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအရ ဖိနှိပ်ခံ လူမျိုးစုအဖြစ်နဲ့ ပုံဖော်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း မလေးရှားနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘာသာရေး အခြေခံပါတီတွေ၊ ဘာသာရေး ကျောင်းတွေက ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီ သုံးခဲ့ပါတယ်။ မကဒတ ကိုလည်း ဒေါ်လာ တစ်သန်းကျော် ပေးခဲ့ပြီး လက်နက် အချို့လဲ ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီအထိ ရောက်သွားပြီး ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုဆိုတာ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ အတည်လို ဖြစ်သွားပါတယ်။ နအဖကို တိုက်ဖို့ သုံးတဲ့ လက်နက်ကြောင့် နအဖအစိုးရ ပြုတ်ကျ မသွားပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ထဲမှာတော့ ဘယ်တုံးကမှ မရှိခဲ့တဲ့ မုတ်ဆိတ်ဖားနဲ့ ကုလားလူမျိုးစု တစ်စု အပိုင်ရလိုက်ပါပဲ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဒီလို ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဘင်္ဂါလီ ကုလားများဟာ သူများနိုင်ငံကို ခိုးဝင်တဲ့လူ အဖြစ်ကနေ ဖိနှိပ်လို့ ထွက်ပြေးလာ ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒုက္ခသည်ဘ၀ကို ရောက်သွားပါ တော့တယ်။ ဒီခေါင်းစဉ် အောက်ကနေ ထိုင်း၊ မလေးရှားဘက်ကို ထွက်ကြ တော့တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုခိုးဝင် နေတာတွေ ရှိတုံးဖြစ်သလို၊ ခိုးဝင် လာသူတွေကို ဖော်ထုတ် အရေးယူဖို့ လုပ်တိုင်း ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေကို ဖိနှိပ်ပါတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာမှာ အသံကုန် အော်ခွင့် လိုင်စင် ရသွားတာပါပဲ။
မကဒတ နောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင် လာတာက ဦးဟန်ယောင်ဝေပါပဲ။ ဦးဟန်ယောင်ဝေကလဲ မကဒတရဲ့ စဉ်းစားပေါက် အတိုင်းပဲ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ငွေတွင်းကြီးလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ENC အနေနဲ့ရော၊ ဥရောပမှာ သူလှုပ်ရှားနေတဲ့ အသိုင်းအ၀န်း ထဲမှာရော ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို Issue အဖြစ်နဲ့ တင်လာပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာကို ပြည်ပရောက် ရခိုင်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးဟန်ယောင်ဝေဟာ ဦးခင်မောင်လို ရခိုင်ကိုယ်ကျိုးရှာ နိုင်ငံရေး သမားကိုတော့ နံမည်ခံ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေးပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ရခိုင်လူမျိုးတွေက ထောက်ခံတဲ့ အသွင်ကိုတော့ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် ရနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ကုလားများရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တွေ ဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် စတာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာပြည်သူ တွေလိုပဲ သူတို့အနေနဲ့ ဒီအခွင့်အရေးတွေကို ရဖို့အတွက် စည်းရုံး လှုပ်ရှားတာကို ကျွန်တော်တို့ ထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော် ဒီအခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဘင်္ဂါလီ ကုလားတွေကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် ဖန်တီးတာကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီအခွင့်အရေးကို အကြောင်းပြပြီး နောက်ထပ် တရားမ၀င် ခိုးဝင်မှုတွေ ဖြစ်လာအောင် အားပေးတာ။ ခိုးဝင်လာခဲ့သူတွေကို မြန်မာ နိုင်ငံသား အဖြစ် ရောက်အောင် လုပ်တာတွေ ကိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်အောင် အားပေးနေတဲ့ ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး သမားများကိုလည်း သူတို့ အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တုံးကမှ မရှိတဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုး ပေါ်လာအောင် လိမ်ညာ လှည့်ပတ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံ နေခြင်းဟာလဲ ရခိုင်လူမျိုးများကို စော်ကားနေတာ ဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖော်ဆောင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ညီညွတ်မှုကို ပျက်စီးအောင် လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပေးလိုပါတယ်။
၆၀ တုံးက ဦးနုအာဏာရူးပြီး ကတိတွေ ပေးခဲ့တာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးက အတည် ဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြီ။ အခုလဲ နအဖကို ဆော်ဖို့ အတွက် ရိုဟင်ဂျာကို သုံးဖို့ ပြန်လုပ်လာပြန်ပြီ။ ဒါဟာ ဖရန်ကင်စတိန်းလို ဖုတ်ကောင်ကြီးကို အသက်သွင်း ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ နအဖ နဲ့သာ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသားရေး၊ ပြည်ထောင်စု အရေးဖြစ်တယ် ဆိုတာကို မမေ့ဖို့ လိုပါတယ်
သမိုင်းတစ်ကွေ့ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ အကြောင်းရေးဖို့ အချက်အလက်တွေ ပြန်ရှာနေ တုံး ရေဒီယိုမှာ၊
အင်တာနက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ဆိုတာတွေ ကြားရသည်။ အစိုးရကို ဆန့်ကျင် နေ သူများကလည်း
ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရကို ဆော်ဖို့အခွင့်အရေးရင် မနည်းဘူးဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဂရုဏာသက်စရာ
အဖိနှိပ်ခံများအဖြစ် ဘေးတီးပေးကြသည်။ ထိုလုပ်ရပ်သည် မည်မျှ အန္တရာယ်ကြီး သည်ကို ထိုသူတွေသိပါရဲ့လား။
ကျွန်တော် ၀န်ထမ်းဘ၀ တစ်လျှောက်တွင် နှစ်အတော်များများ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ နေခဲ့သဖြင့် ဒီပြဿနာကို
ထိတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် သိသမျှကို ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူမှန် ပြီး ဘယ်သူမှားသည်ကိုတော့ စာဖတ်သူ
ပထမဆုံး ပြောလိုသည်က ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာကို မူဆလင်ဘာသာဝင်
လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ပြောနေသည်။ ကျွန်တော် စိန်ခေါ်လိုပါသည်။ မြန်မာဘုရင် လက်ထက် စစ်တမ်းတွေ၊
အင်္ဂလိပ် ဂေဇက်တီးယားတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခေတ် မှတ်တမ်းတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုသည့်
စကားလုံး ရှာကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်တော့မှ တွေ့မည်မဟုတ်၊ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်က ကောက်ခဲ့သော
သန်းကောင်စာရင်းများ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းကောင် စာရင်းများ တွင်
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု မရှိပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးမှာ စစ်တကောင်း ကုလားများက ရခိုင်ပြည်သားများကို
ခေါ်သည့် ရိုဟင်ရှာ ဆိုသည့် စကားက လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားကုလားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့
ရခိုင်ပြည်သား နံမည်ခံလိုသဖြင့် ဒီစကားကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် တီထွင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ့အရင်က
ဒီကုလားများအတွက် နံမည်ရှိပြီးသား ဖြစ်သည်။ ဒါကတော့ ကုလားဆိုး သို့မဟုတ် မူဂျာဟစ်များ ဖြစ်သည်။
ဒီကုလားဆိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လို ရောက်လာခဲ့သနည်း ။
ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင့် နယ်ချင်းဆက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခင်က မူစလင်ကုလားများ ရှိခဲ့သည်။
သို့သော် ဒီလူတွေက ဒေသခံများမဟုတ်။ ရခိုင်ဘုရင်များ စစ်နိုင်သဖြင့် ဖမ်းလာခဲ့သူများ၊ ရခိုင်လယ်ယာ
မြေများတွင် အလုပ်ကြမ်းလာ လုပ်သူများဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက် စစ်တမ်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌
ဘင်္ဂလားကုလား သုံးသောင်းကျော် ရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ အင်္ဂလိပ်လက် အောက်ရောက်သောအခါ
မြန်မာနိုင်ငံသည် အန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့်အခါ ကုလားတွေ တံခါးမရှိ၊
ဓားမရှိဝင်လာကြသည်။ ဆင်းရဲတဲ့ ကုလားတွေက လယ်ကူလီ လုပ်သည်။ ချမ်းသာတဲ့ ကုလားက ငွေတိုး
ချေးစားသည်။ အင်္ဂလိပ်က စူးအက် တူးမြောင်းကြောင့် စပါးဈေးကောင်းတော့ လယ်သစ်တွေဖော်ဖို့ ကုလားတွေ
ခေါ်လာသည်။ ထိုအချိန်က တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ် ဘင်္ဂလားက ကုလားတွေကို သဘောင်္နဲ့ သွင်းကြောင်း။
သဘောင်္ခကို အထူးနှုန်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ရှေ့မီနောက်မှီ ရခိုင်လူကြီးများက ရှင်းပြဖူးသည်။
သေချာသည်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်စ ၁၈၃၂ ခုနှစ် စာရင်းအရ လူဦးရေ တစ်သိန်းခွဲရှိသည့်
ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ၁၉၃၂ ခုနှစ် သန်းကောင်စာရင်းအရ စစ်တွေခရိုင် တစ်ခုတည်း၌ပင် လူဦးရေ ခုနှစ်သိန်းခွဲ
ရှိနေတာတွေ့ရ၏။ ထိုကဲ့သို့ ချက်ခြင်း တိုးလားသည့် လူများမှာ အင်္ဂလိပ်တို့ နေရာချပေးခဲ့သည့် ဘင်္ဂလား
ထိုကဲ့သို့ တိုးလာသည့် ကုလားအများစုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် နယ်နမိတ်ချင်း ဆက်နေသည့် ဘူးသီးတောင်၊
မောင်တော ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုအချိန်က ထုတ်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ် အစိုးရ ဘားမားဂေဇက် စာအုပ်တွင်
၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင် မောင်တော မြို့နယ်၌ မူဆလင် ကုလားနှစ်သောင်း ရှစ်ထောင်ကျော် ရှိရာမှ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင်
ကုလား တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းကျော် ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုဒေသတွင် ရောက်လာ သော ကုလားများမှာ
တစ်ဖြေးဖြေးနှင့် ရခိုင်များကို မောင်းထုတ်ရန် ကြိုးစား လာခဲ့သည်။
ယနေ့အထိ ရခိုင်လူမျိုးတို့ မေ့မရသည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ရခိုင်- ကုလား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အင်္ဂလိပ်တပ်များ ဆုတ်ခွာသွားပြီး ဘီအိုင်အေတပ်များ ရောက်မလာမီ ကြားတွင် ဘူးသီးတောင်၊
ရသေ့တောင်နဲ့ မောင်တောနယ်တွေမှာ ရှိသည့် ရခိုင်ရွာများကို ဘင်္ဂလာလီ ကုလားများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊
လူသတ်ခြင်းများ လုပ်ခဲ့သည်။ ပြဿနာ အစမှာ မြေပုံမြို့နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုး သူကြီးတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်
ကုလားနှစ်ဦးကို ရွာသားများက သတ်ပစ်ရာမှ စခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် နယ်စပ်ဒေသမှ ရခိုင်လူမျိုးများကို
ယခုခေတ်အခေါ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ် သွားခဲ့ရသည်။ ဆုတ်ခွာသွားသည့် အင်္ဂလိပ်
တပ်များက နယ်စပ်ဒေသ ကုလားများကို လက်နက်များ ထုတ်ပေးပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်သဖွယ်
တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုး သွားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုပြဿနာကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး
နှစ်သောင်းခန့် သေဆုံးသည်ဟု ရှေးလူကြီးများက ပြောကြ သော်လည်း အထောက်အထား မတွေ့ရ။ သို့သော်
စစ်ပြီးခေတ် ကတ်စ်ဘီ အစိုးရ အစီရင်ခံစာတွင် ထိုအချိန်က ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းသို့ ထွက်ပြေးလာသော
ရခိုင်လူမျိုးများကို ပြန်လည် နေရာချ ပေးရာတွင် မူလက မောင်တောဒေသတွင် ရခိုင်ရွာ ၁၂၉ ရွာရှိခဲ့ရာ ၆၈
ရွာသာပြန် လည်ထူ ထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအချိန် ကစပြီး ဘင်္ဂလီ ကုလားတို့က
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင် လူများစု ဖြစ်သွားခဲ့သည်။
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် အန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းမှု များလည်း
တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်စဉ် အန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှ မူဆလင် အများစု နေထိုင်ရာ ဒေသများကို
ခွဲထုတ်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ထူထောင်ပေးရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပေါ်လာ၏။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းမည့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင်
ဘင်္ဂလားပြည်နယ်က အရှေ့ပါကစ္စတန် အဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဘူသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသက
ကုလားများကလည်း ထိုဒေသများကို ပါကစ္စတန်နှင့် ပူးပေါင်းရန် တောင်းဆိုမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လန်ဒန်သို့ လွတ်လပ်ရေး ဆွေးနွေးရန် အသွား အန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ခေါင်းဆောင်ကြီး နေရူးနှင့်
တွေ့ခဲ့သည့် အကြောင်း ကြားဖူးကြ ပါသည်။ သို့သော် ထိုခရီးစဉ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ
သမ္မတဖြစ်လာမည့် အလီဂျင်းနားနှင့် တွေ့ခဲ့သည်ကို သိသူနည်းပေလိမ့်မည်။ တက္ကသိုလ်နေ၀င်း၏
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက်
အလီဂျင်းနားက ဘူသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသကို ပါကစ္စတန် နိ်ုင်ငံအတွင်း ထည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုမှုများကို
လက်မခံကြောင်း၊ ထိုဒေသများသည် မြန်မာပိုင် ဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ် ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု
ထိုတောင်းဆိုမှုများ မအောင်မြင်သည့်အခါ မူဂျာဟစ် အမည်ခံ ကုလားဆိုး သောင်းကျန်း သူများ ပေါ်လာသည်။
နယ်စပ်ဒေသတွင် အခြေခံပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသကို သီးခြားပြည်နယ် ထူထောင်ဖို့ လုပ်ခဲ့သည်။
အစိုးရ စခန်းများကို တိုက်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးများကို မောင်းထုတ်သည်။ တပ်မတော်ကလည်း ကေအင်ဒီအို
အရေးနှင့် လုံးပန်းနေရသဖြင့် အမြစ်ပြတ်အောင် မတိုက်နိုင်၊ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှသာ နယ်စပ်ရှိ မူဂျာဟစ်တို့၏
တောင်ပြိုစခန်းကို သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က သတင်းစာများကို ပြန်ဖတ်လျှင် ၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၄
အကြားတွင် ကုလားဆိုးဟု သတင်းစာများက ခေါ်သည့် မူဂျာဟစ်များ မည်မျှ ရက်စက်ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင် သည်။
သို့သော် စစ်ရေးတွင် အရေးနိမ့်သွားသည့် ကုလားများက နိုင်ငံရေးနယ်တွင် ခေါင်းထောင်လာ ပြန်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ခေါင်းထောင်နိုင်ခြင်းမှာမူ ဖဆပလတွင် တာဝန်ရှိပေသည်။ ထိုအချိန်က ရခိုင် ဒေသ ( ပြည်နယ်
မဖြစ်သေး) တွင် ဖဆပလက အင်အားမကောင်းပဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီ ညွတ်ရေးအဖွဲ့ ရတညက
အင်အားကောင်းသည်။ ထိုအခါ ဖဆပလက ဘင်္ဂလီကုလားများကို ဖဆပ လအတွင်းဝင်ရန်နှင့် အမတ်အရွေးခံရန်
ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် မှတ်ပုံတင်မရှိသော ကုလားများမှာ ကုလားသူကြီးက ထောက်ခံစာရေးပေးလျှင် မဲပေးခွင့် ရခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဒူဂေါ်ဖား၊ စူလတန် အာမက်၊ အဘူခိုက်၊ အဘူဘော်ရှော့ ဆိုသည့်
မုတ်ဆိတ်ဖားဖား ကုလားများသည် ဖဆပလ အမတ်များ ဖြစ်လာသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပါလီမန်အတွင်းဝန် အဖြစ် စူလတန်မာမွတ် ဆိုသူဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ လ၀က အတွင်းဝန် ကုလားတစ်ယောက်လည်း
ရှိခဲ့သေးသည်။ နံမည်မမှတ်မိတော့။ ကုလားကို လ၀က အတွင်းဝန် ခန့်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ
စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။ ထိုခေတ် ဖဆပလ အစိုးရက ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင်
လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အရှေ့ပါကစ္စတန်မှ ကုလားများကိုပါမစ်ဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ဝင်လာသူ အများစုက
ပြန်မသွားပဲ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ကျန်နေခဲ့ သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရတက်မှသာ
ထိုသို့ ပါမစ်ဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုခြင်းကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ရသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် စကားလုံးကိုလည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်
ဖဆပလ အမတ်ဖြစ်နေသည့် ကုလားများက စတင်တီထွင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်မူဆ
လင်ဟု ဆိုသည်။ တကယ်တော့ ကုလားသည် ကုလား၊ ရခိုင်သည် ရခိုင်သာဖြစ်၏။ ရခိုင်လူမျိုးတွင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သာရှိသည်။ မူဆလင်မရှိ။
တော်လှန်ရေး ကောင်စီလက်ထက်တွင် နယ်စပ်ဒေသ၌ ခိုးဝင်မှုများ ရှိသေးသော်လည်း ယခင် ကလောက်
မများတော့။ ကုလားဆိုးများလည်း နိဂုံးချုပ်သွားသည်။ သို့သော် ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေအတွက် ပြည်သူများ
ထံမှ အဆိုပြုချက်များတောင်းသည့်အခါ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောက ကုလားများက ဘူးသီးတောင်၊
မောင်တော ဒေသကို မေယုတိုင်းဟု သီးခြားဖွဲ့စည်းရန်။ အလံတွင်လည်း ကြယ် ၁၄ လုံးအစား ၁၅ လုံးထည့်ပေး
ရန် စာတမ်းများပြုစုတင်ပြခဲ့သည်။ အတော်ပင် အရှက်မဲ့ ရဲတင်း သောလုပ်ရပ်ဖြစ်၏။
ဤသို့ဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးရှိမရှိဆိုသည်ကို ရှင်းလောက်ပြီဟုထင်ပါသည်။ ထိုသို့ ခိုးဝင်
အခြေချနေသည့် ကုလားများကို စိစစ်ရန်အတွက် လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ လက်ထက်က ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင်
လည်းကောင်း၊ န၀တ အစိုးရ လက်ထက်က ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့လုပ်တိုင်း မှတ်ပုံတင်မရှိသည့်ကုလားများက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ထွက်ပြေး ပြီး သူတို့ကို
မြန်မာအာဏာပိုင်များက နှိပ်စက်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရပါသည်ဟု အော်သည်။ နှစ်ကြိမ် လုံးတွင် မြန်မာဘက်က
လွတ်လပ်ရေးမရမီ ကာလထဲက မိဘများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား ပြနိုင်သူများကို
ပြန်လက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ ခိုးဝင်လာ သူတွေက ဒုက္ခသည် နံမည်ခံပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ကျန်နေခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ
ဒုက္ခသည် ဟု နံမည်ခံလာကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာတပ်ဦး ဆိုပြီး သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ဖွဲ့သည်။
အခု ထိုင်းမှာ၊ မလေးရှားမှာ ရှိနေသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ မှ ထွက်ခွာလာသည့်
ကုလားများသာဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံတွေကို သွားသလို မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့လဲ ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစား နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါ့ကြောင့်လဲ အစိုးရက နယ်စပ်မှာ လ၀ကတွေကို အများအပြား ချထားပြီး နယ်စပ် ဒေသကို ထိန်းသိမ်း
နေရသည်။ သို့သော် ကုလားများက မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ များဖြစ်သည်၊ မြန်မာတို့က
နှိပ်စက်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရပါသည်ဆိုပြီး ထိုင်းမှာ၊ မလေးရှားမှာ နိုင်ငံ ရေးခိုလှုံခွင့်ရအောင် ကုလားမူ၊
ကုလားချွဲလုပ်သည်။ ဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအစိုးရကို တွယ်ဖို့ အခွင့်အရေးရလျှင် တော်ပြီဆိုသည့်
အတိုက်အခံ များကလည်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို မြန်မာအစိုးရ၏ နောက်ထပ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု
တစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်နိုင်အောင် မီဒီယာ ပေါ်တင်လာကြသည်။
သို့သော် ယခုကိစ္စသည် တပ်မတော် အစိုးရနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စမဟုတ်၊ အမျိုးသား ရေးဖြစ်သည်။
သမိုင်းတစ်လျှောက် မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထိုးဖောက် လာခဲ့သည့် ကုလားများက သမိုင်းတွင် မရှိသည့်
လူမျိုးစုနံမည်ကို ဖန်တီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် တရားဝင်ခြေကုတ်ယူဖို့ လုပ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ
ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ချင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုများကို ဘေးချိတ်ပြီး
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာ မျက်နှာစာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရမည့်
အချိန်ဖြစ်ပါ၏။ မြန်မာမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမရှိ။ မူဆလင် ဘာသာဝင် ကုလားများသာ ရှိသည်ဆိုသည်ကို
ပြောရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းကို သိပြီး အမျိုးသား ရေးဘက်က ရပ်တည်နိုင်ရန် အတွက် မိမိသိသမျှကို
by UZa Wana on Monday, October 31, 2011 at 11:01pm
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်သူ၊လက်ရှိအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ရဲ့ဒုဥက္ကဌလည်းဖြစ်သူ ဦးတင်ဦး ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေကို အာအက်ဖ်အေ မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုကနေ ပြည်သူ့ ဖက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက် အစီအစဉ်အနေနဲ့ ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ ၃၊၁၀၊၂၀၁၁နေ့ က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဦးတင်ဦး က ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ပဲ ဘင်္ဂါလီ လို့ ခေါ်တာကိုမကျေနပ်လို့ဆိုပြီးမြောက်အမေရိကတိုက်မှာ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ BRANA ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်းမှကန့် ကွက်တာကို ၁၄၊၁၀၊၂၀၁၁နေ့ က အာအက်ဖ်အေရေဒီယို အစီအစဉ် မှာကြားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တကောင်းအနွယ်ဝင် ဘင်္ဂါလီတွေ မဟုတ်မမှန်ဖော်ထုတ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားအလိမ်ကိစ္စကို အများပြည်သူတွေသိစေဖို့ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသားလိုက် ရခြင်းဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုတာကို မြောက်ဦးခေတ်၊ဓည၀တီခေတ်တို့ မှာပဲရှာရှာ၊ ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ (၁၈၇၂ခုမှ ၁၉၁၁ခု) စတဲ့သန်းကောင်စာရင်း (census) တွေမှာပဲရှာရှာ ရှာတွေ့ နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားအလိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုတာဟာ အရင်ကလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ အခုလည်းရှိမနေဘူး။ နောက်လည်းရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုပဲ သမိုင်းနဲ့ ချီပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ပညာရှင်တွေရှင်းပြတာ ထုတ်ပြန် ထားတာတွေကလည်း ဒုနဲ့ ဒေးရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂါလီတွေဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားမှုဟာ ယခုအထိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို လူ့ အခွင့်အရေးထက် ကျော်လွန်ပြီး လုပ်နေတယ်။
ပထ၀ီအနေအထားအရ ခိုင်လုံတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ကိုယ် ပိုင်ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာရှိသူများကို တိုင်းရင်းသားလို့ ခေါ်တယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေဟာ မနေ့ တနေ့ ကမှ ရုတ်တရက်ကောက်ကာငင်ကာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရာဇ၀င်နဲ့ ချီတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ရှင်သန်ကြတာဖြစ်တယ်။ ရခိုင်၊မွန်၊ဗမာ၊ရှမ်း၊ကရင်၊ကယား(ကရင်နီ)၊ ကချင်၊ချင်းစတဲ့ အဓိကတိုင်းရင်းသားအင်အားစုကြီးတွေမှာ ခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ကျောက် စာနဲ့ ပေ၊ပုရပိုက်တို့ မှာတွေ့ ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး တိုင်းရင်းသားဖြစ်လာသူများလည်းမဟုတ်ပါ။ ရှိရင်းစွဲဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းသာ ရှေးပဝေဏီကပင် နေထိုင် သူများဖြစ်တယ်။
အာရပ်လူမျိုးတွေက အရှေ့ တောင်အာရှကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်လာရောင်းကာ ရမ်းဗြဲကျွန်းနားက သင်္ဘောပျက်ပုံပြင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ ပြီး သမိုင်းကိုလုပ်ကြံဖန်တီးလို့မရပါ။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခါစမှာပင်မူဂျာဟစ်သူပုန်များထကြွခဲ့တာသမိုင်းအမှန်ပါ။ဗမာ့သေနတ် ကိုင် တပ်ရင်း(၅) က မူဂျာဟစ်တွေကို တောင်ပြိုတိုက်ပွဲနဲ့ အပြီးသတ်တိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်က ရန်ကုန်-အင်းစိန်တိုက်ပွဲတောင် မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ(အရှေ့ ပါကစ္စတန်)ဆိုတာ လည်း မပေါ်သေးပါ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်။ မူဂျာဟစ်သေနတ်သံတွေနဲ့ အပြိုင် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောအမတ်ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာဂါးဖါးရ်က ဂါးဒီယန်း သတင်းစာကနေ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ပေးထားတဲ့ မူဆလင်လူမျိုးသစ်ကိုဖန်တီးအသက်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာလိမ်ညာမှုတခုသာဖြစ်ကြောင်း၊ မူဆလင်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါကြောင်း ဦးဖော်ဇံ ဆိုသူက ဂါးဒီယန်း သတင်းစာမှာပဲ ချက်ချင်းတုန့် ပြန်ရေးသားခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တောင်ပိုင်းမှ ပတ္တနီ၊ယာလာနဲ့ နာရာသီဝပ်ဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ မူဆလင်ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားမှုတွေဟာတပုံစံတည်းပဲဖြစ်တယ်။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းမူဆလင်သမိုင်းကလည်း အာရပ်တွေရဲ့ ဟင်းခပ်အမွှေးအကြိုင်နဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင်တယ်။
၁၉၅၀ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်များက မူဂျာဟစ်သူပုန်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာဟာ ဆက်စပ်နေတယ်။ဒီအရင်က မရှိခဲ့ပါ။ မြစ်ဖျားခံမှုက ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ ရဲ့တံခါးမရှိ၊ဓါးမရှိ လူဝင်မှုဝါဒမှ စတင်ခဲ့တယ်။ ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက် ခါစ (၁၈၂၅)ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်မှာ မူဆလင်လူဦးရေ သုံးသောင်း(၃၀၀၀၀)သာရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၃၀ခုနှစ်မှာ တော့ မူဆလင်ဦးရေ နှစ်သိန်းတသောင်းခုနှစ်ထောင်ရှစ်ရာ (၂၁၇၈၀၀) အထိတိုးပွားခဲ့တယ်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရက စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တခုဖွဲ့ စည်းခဲ့တယ်။ကော်မရှင်က မူဆလင်ဦးရေ အဆီး အတားမရှိ တိုးလာမှုကို မဟန့် တားပါက လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အစီရင်ခံခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာလို့ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်။ ၁၉၄၂ခုနှစ်မှာကုလား-ရခိုင်အဓိကရုဏ်းပေါ်ထွက် ခဲ့တယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က အိန္ဒိယမှ သွင်းလာတဲ့ လယ်ကူလီ နဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ရိုဟင်ဂျာဟာ အသွင် သဏ္ဍာန်အရကို မတူညီပါ။ အိန္ဒိယလယ်ကူလီတွေက နယ်ချဲ့ စံနစ် နဲ့ စီးပွားရေးအပေါ် အခြေခံလို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ချိန်မှာ ပြန်ထွက်သွားကြတယ်။ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကတော့ ခြေကုတ် ယူနယ်ပယ်ချဲ့ ဖို့ နဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာအထိတက်လှမ်းဖို့ အစီအစဉ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။
မြန်မာမူဆလင်တိုင်း ရိုဟင်ဂျာ(တိုင်းရင်းသားအလိမ်) မဟုတ်
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကိုထွေးတို့ ၊ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ပထမ ဆုံးမြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးဖေခင်တို့ ဟာ မြန်မာအမျိုးသားရေးစိတ်ရှိ တဲ့ မြန်မာမူဆလင်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ ဟာ အညာမှာရှိတဲ့ မြန်မာမူဆလင်မိသားစုတွေက မွေးဖွားခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာရာဇ၀င်မှာ ဘုရင်ကချီးမြောက်ခဲ့တဲ့ ဗျဝိ၊ဗျတ္တဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းညီအကို ရှိပါတယ်။ ဒီညီအကိုလည်း သင်္ဘောပျက် ပြီး ယခုမြန်မာနိုင်ငံလို့ ခေါ်တဲ့အရပ်ကိုရောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုရာဇ၀င်တွေကျတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီးလိမ်ညာဝါဒဖြန့် နေသူတွေမသိသလိုနေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာ(တိုင်းရင်းသားအလိမ်) မပေါ်ထွက်မှီကတည်းက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရက်သားကျနေကြတဲ့ မူဆလင်တွေ သားစဉ်၊မြေးဆက်ရှိကြတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဟာစစ်တကောင်းကဘင်္ဂါလီလောက်ကိုတောင်အမျိုးမတော်ပဲ၊ ခုန်ကျော်ပြီး အာရပ်တွေနဲ့ အမျိုးစပ်ထားပုံကဇာတ်နိမ့်၊ဇာတ်မြင့်ဆိုတာကိုမျော်မြင်လို့ လား၊တမန်တော် ရဲ့ သာကီမျိုးတွေဖြစ်ချင်လို့ လား မေးရမလိုဖြစ်နေတယ်။
တိတ်တဆိတ်မကောင်းကြံမှု (Conspiracy Theory)
မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့အရိပ်နေနေ၊အခက်ချိုးချိုးဆိုတာနဲ့ အာရပ်ကုလားအုပ်ပုံပြင်တို့ ဟာ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်တယ်။၁၉၈၀နှစ်များဝန်းကျင်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံပြီး ရန်ကုန်မြို့ မှာပါပြန့်ခဲ့တဲ့စာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသ္မီးကိုယူရင် ငွေဘယ်လောက်၊ ဘွဲ့ ရတို့ ၊ ဗိုလ်မှူးသမီးတို့ ယူရင်ငွေ ဘယ်လောက်ချီးမြောက်မယ်ဆိုတဲ့စာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိ်န်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ရခိုင်ကျောင်းသား အများအပြားနေတာက ပင်းယဆောင်ဖြစ်တယ်။ ပင်းယဆောင်မှာ ဘူးသီးတောင်၊မောင်းတောဘက်က ကျောင်းလာတက်တဲ့ ကုလားကျောင်းသားလေး၊ငါးဦးကိုထောက်လှမ်းရေးကစာကိစ္စနဲ့ ဖမ်းဆီးသွားတာ ကိုလည်းတဆောင်တည်းနေရခိုင်ကျောင်းသားတွေတောင်မသိရှိပါ။အဆောင်မှူး၊ကထိက၊ပါမောက္ခ နဲ့ပါမောက္ခချုပ်တို့ တော့ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖမ်းခံသွားရတဲ့ ဘူးသီးတောင်၊မောင်းတောကျောင်းသား လေး၊ ငါးဦးဟာ လစ်ဗျားနိုင်ငံထောက်ပံကြေး(stipend) နဲ့ ကျောင်းတက်နေတာလို့နှစ်များစွာကြာပြီးမှဆက် စပ် တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေအရသိရပါတယ်။
၁၉၉၀၀န်းကျင်နှစ်များကကရင်ပြည်နယ်မှာ ထီးပါဝိကျိုးတိုက်ပွဲတွေနဲ့ စစ်သံမြိုင်နေချိန်မှာကုလားတွေ (မဆလရွေ့ ပြောင်းမှု၊မှောင်ခိုခေတ်ကြောင့်ရောက်လာသူများ)စုနေကြတဲ့ရွာတရွာမှာ ကုလားတဦးသေ ဆုံးတယ်။ သူတို့ ဘာသာရေး အရ င်္သချိုင်းသတ်မှတ်ပေးရမယ် ဆိုပြီး တောင်းလာတယ်။ အဲ့ဒီဒေသ တာဝန်ကျတဲ့ KNLA ကရင်စစ်ကြောင်းမှူးပြန်ပြောတာရှင်းပါတယ်။ ငါတို့တသက်လုံး ဒီမှာနေလာတာ ဘာင်္သချိုင်းမှမရှိဘူး။ ဒီတိုင်းမြုတ်တာ၊အပုပ်နံမထွက်စေနဲ့ တဲ့။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒီအေဘီထဲပါဖို့ကိုလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ(အာအက်စ်အို)အဖွဲ့ ကကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့ အားလုံးကလက်မခံတော့ ဒီမိုကရေစီမရှိဘူး၊လူ့ အခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့ သမုတ်ခဲ့သေးတယ်။ ဘာသာရေးအလံထောင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ(တိုင်းရင်းသားအလိပ်)မှိုင်းတိုက်နေမှုများကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည် စစ်တွေတောင်မရောက်ဘူးတဲ့သူတွေ၊ ရန်ကုန်မှာပညာသင်ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မူဆလင်ဆိုသူတွေ က စစ်တကောင်းဇာတိလား၊ အာရပ်ဇာတိလားမကွဲပြားပဲ ရိုဟင်ဂျာဇာတ်လမ်းကို ယူကေတို့ ၊ မြောက် အမေရိကား တို့ ကနေ ထုတ်လုပ်နေကြတာ ကို့ ရို့ ကားယား ဖြစ်နေတယ်။ ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက် ဆော်ဒီအာရေဗျက ထွက်သလို ဖြစ်နေတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအရေးရဲ့ နောက်မှာ ဆော်ဒီလို အာရပ်ငွေတွင်းတွေ လိုက်ပါလာတော့ ခေတ်မှီတဲ့ ရောင်းဝယ် မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသမတကြီးသားတာမဟုတ်၊ ဆဌမသံဃာယနာတင် ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ သားလည်း ၁၉၉၄-၅ခုနှစ်များအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမူဆလင်အကျိုးဆောင်များအဖွဲ့ဆိုပြီး ဆော်ဒီအာရပ်ကမ္ဘာမှ ငွေဂွင်ဖန်ဖို့ လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလူတွေဟာ တိုင်းရင်းသားစစ်ရုံတင် မကဘူး။ မြန်မာ့အဓိပတိအနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်း မြန်မာအမျိုးသားရေးစိတ်ရှိတဲ့ လေးစားရတဲ့ ဟာဂျီတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဟာဂျီကြီးတွေဟာ ဟိုအရင်ကတည်းက နှစ်စဉ် မက္ကာကို ဘုရားဖူးသွား သူများဖြစ်လို့ဆော်ဒီက ငွေအထောက်အပံ့ရဖို့ နည်းတွေကို ပြောဆိုဖူးပေမယ့် တိုင်းပြည်အတွက် မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တာကိုသိလို့ ၊နိုင်ငံရေးအမြင်လည်းရှိလို့ သေတပန်သက်တဆုံး မြန်မာအမျိုးသား ရေး စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရပ်တည်သွားကြပါတယ်။
နိုင်ငံတွေရဲ့ နယ်စပ်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ နီးစပ်တဲ့ဒေသတိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြန့် နှံ့ ခဲ့ရတယ်။အိန္ဒိယ -မြန်မာနယ်စပ်မှာ ချင်းလူမျိုးဆို အိန္ဒိယ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်း ရှိတယ်။ နာဂနဲ့ ကသည်းလူမျိုး လည်း ဟိုဘက်နဲ့ ဒီဘက်မှာရှိကြတယ်။ ချင်းတိုင်းရင်းသားဆိုရင် ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်တယ်။ ၀လူမျိုးဆို တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်။ မြောင်-မျော့လူမျိုးဆို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တို့ မှာပြန့် နှံ့နေတယ်။ဒါတွေဟာ ကိုလိုနီသိမ်းယူမှုရဲ့မြေပုံအရ grid line ဆွဲမှုတွေကြောင့် ဖြစ်သွားရတယ်။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့တချိန်က မြန်မာပိုင် ကပ္ပလီကျွန်း (adaman island) ဟာ ယခုအခါမှာ အိန္ဒိယပိုင် ပို့ ဘလဲယားကျွန်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်သွားတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဘာသာကွဲပြားမှုနဲ့ မဆိုင် သမိုင်းရဲ့ လောဂျစ် မကျတာနဲ့ ဆိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့လူမျိုးကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အတင်းသွပ်သွင်းကာ သမိုင်း ကို လိမ်နေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ သမိုင်းမှာ ကျဆုံးရမှာ သေချာတယ်။ ။
ကိုးကား။ ။ ၁၊လူ့ အခွင့်အရေးအရေခြုံ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံစစ်တကောင်းအနွယ်ဝင်ဘင်္ဂါလီတို့ ၏နယ် သစ်ချဲ့ ထွင်ရေးသမိုင်းလိမ်ကိုဝေဖန်ခြင်း၊ ခိုင်မြ၀ါ၊ ရခိုင်အမျိုးသားအသင်းဂျပန်၊ ၂၀၀၃ခုနှစ်-ဇွန်လ
၂၊ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသပဋိပက္ခနှင့်အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာ၊ ကိုကိုလှိုင်၊ပြည်စုံစာအုပ်တိုက်၊၂၀၀၈- ဇူလိုင်လ
၃။ကျနော်ကျင်လည်ခဲ့ရသောမြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ၊ သူရထွန်းတင်၊ ပြည့်စုံစာအုပ်တိုက်၊ ၂၀၀၈-ဧပြီလ
၄။Census of Burma 1911၊ Government printing၊ Rangoon၊ (Reprinted) 1986
by Kyaw H. Aung on Saturday, October 29, 2011 at 6:43am
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိမ်များ မီးရှို့ခံရစဉ်။ (၁)
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိမ်များ မီးရှို့ခံရစဉ်။ (၂)
စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ်က ရခိုင်မျိုးနွယ်စုနဲ့ တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အိမ်များ မီးရှို့ခံရစဉ်။ (၃)